अमेरिकामा एकैदिन १३ सय बढिको मृत्यु, २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने ५ देशहरु ! – Sagarmatha Online News Portal
अमेरिकामा एकैदिन १३ सय बढिको मृत्यु, २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्यु हुने ५ देशहरु !
काठमाडौं । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)बाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ५९ हजार १ सय ९३ जना पुगेको छ ।
संक्रमितको संख्या भने १० लाख ९९ हजार ६ सय २२ जना पुगेको छ । २ लाख २८ हजार ९ सय ३८ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ८ लाख ११ हजार २ सय ५० जना उपचाररत छन् । भने, ३९ हजार ४ सय ३९ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि मृत्युदर भएका शक्तिशाली ५ देशरुको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. संयुक्त राज्य अमेरिकाः
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र अर्थात एकै दिनमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढि अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएको छ । एकै दिनमा अमेरिकामा १ हजार ३ सय २१ जनाको मृत्यु भएको छ । नयाँ संक्रमितको संख्या भने ३२ हजार २ सय ८४ जना थपिएका छन् । २४ घण्टाभित्र सबैभन्दा बढि कोरोना संक्रमित पनि अमेरिकामै थपिएका छन् ।
हालसम्म अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७७ हजार १ सय ६१ जना पुगेको छ । अहिलेसम्म ७ हजार ३ सय ९२ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । १२ हजार २ सय ८३ जना प्राणघातक रोगबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । भने, अझै २ लाख ५७ हजार ४ सय ८६ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ५ हजार ७ सय ८७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको बताइएको छ ।
कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढि मृत्युदर हुने देशको दोस्रो नम्बरमा फ्रान्स परेको छ । हिजो फ्रान्समा सबैभन्दा बढि कोरानाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा पहिलो नम्बरमा थियो । फ्रान्समा २४ घण्टाभित्र १ हजार १ सय २० जनाको मृत्यु भएको छ । ५ हजार २ सय २३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
हालसम्म फ्रान्समा ६४ हजार ३ सय ३८ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । भने, ६ हजार ५ सय ७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । १४ हजार ८ जना भने निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ४३ हजार ८ सय २३ जना उपचाररत छन् । भने, ४ हजार ३५ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट बढि मृत्यु हुने देशको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा स्पेन रहेको छ । स्पेनमा ८ सय ५० जनाले गएको २४ घण्टाभित्र ज्यान गुमाएका छन् । नयाँ संक्रमित भने ७ हजार १ सय ३४ जना थपिएका छन् ।
हालसम्म स्पेनमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख १९ हजार १ सय ९९ जना पुगेको छ । भने, ११ हजार १ सय ९८ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । ३० हजार ५ सय १३ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ७७ हजार ४ सय ८८ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ६ हजार ४ सय १६ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र कोरोनाबाट सबैभन्दा बढि नागरिकको मृत्यु हुने देशको चौथो नम्बरमा ईटाली रहेको छ । ईटालीमा ७ सय ६६ जनाको पछिल्लो २४ घण्टाभित्र मृत्यु भएको छ । नयाँ संक्रमित भने ४ हजार ५ सय ८५ जना थपिएका छन् ।
हालसम्म ईटालीमा संक्रमितको संख्या १ लाख १९ हजार ८ सय २७ जना पुगेको छ । भने, १४ हजार ६ सय ८१ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढि कोरोनाबाट ईटालीयन नागरिककै मृत्यु भएको छ । १९ हजार ७ सय ५८ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ८५ हजार ३ सय ८८ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये ४ हजार ६८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाभित्र कोरोनाबाट सबैभन्दा बढि मृत्यु हुनेको सूचीमा पाँचौं नम्बर बेलायत रहेको छ । बेलायतमा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र ६ सय ८४ जनाको मृत्यु भएको छ । भने, ४ हजार ४ सय ५० जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
हालसम्म बेलायतमा ३८ हजार १ सय ६८ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । अहिलेसम्म ३ हजार ६ सय ५ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । भने, १ सय ३५ जना मात्र निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ३४ हजार ४ सय २८ जना उपचाररत छन् । उनीहरुमध्ये १ सय ६३ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर रहेको छ ।